IBC 2019 တွင်ဖောက်သည်များ၏ပါ ၀ င်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်သက်သေပြသည့် AI မောင်းနှင်သည့်ထောက်လှမ်းရေးထောက်လှမ်းရေးပလက်ဖောင်းကိုပြသသည့် Paywizard | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » IBC 2019 မှာဖောက်သည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတိုးမြှင့်သက်သေပြ AI အ-မောင်းနှင်စာရင်းပေးသွင်းထားသူထောက်လှမ်းရေးပလက်ဖောင်းပြ Paywizard
တဦးတည်းလေယာဉ်မှူးများတွင်ရောင်းအားစကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုများနှစ်ဆ - စမ်းသပ်မှုတွေလစာ-TV နဲ့ OTT ပံ့ပိုးပေးအစစ်အမှန်အချိန်အတွက် '' လာမယ့်အကောင်းဆုံး action ကို '' ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်သရုပ်ပြပြီးနောက် Paywizard Singula ™အပြည့်အဝဖြန့်ချိရှုမြင်
လန်ဒန်, 10 စက်တင်ဘာလ 2019 - Paywizard, ထိုစာရင်းပေးသွင်းထားသူထောက်လှမ်းရေးအထူးကုဒီနေ့မှာအပြည့်အဝထုတ်ကုန်ပစ်လွှတ်ကိုကြေညာ IBC 2019 of Paywizard Singulaအောင်မြင်စွာအဓိကဥရောပထုတ်လွှင့်နေတဲ့အရေအတွက်အားဖြင့်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ပြီးမကြာသေးမီကရွေးချယ်ထားပြီးကြောင်း™, တုထောက်လှမ်းရေး (AI) ကို -driven စာရင်းပေးသွင်းထားသူ analytics ပလက်ဖောင်း ပြိုင်ပွဲတီဗီ။ မှပံ့ပိုးသည် မိုက်ကရိုဆော့ဖ Azure AI အ, Singula ™စာရင်းပေးသွင်းထားသူထောက်လှမ်းရေးကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းနှင့် '' လာမယ့်အကောင်းဆုံး action ကို '' လစာ-TV ကိုအော်ပရေတာများနှင့် over-the-ထိပ်ဆုံး (OTT) ပေးသူဖောက်သည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတိုးမြှင့်ယူနိုင်ပါတယ်သတ်မှတ်။ ပလက်ဖောင်းလူကြီးမင်း, စာရင်းပေးသွင်းထားသူသစ္စာရှိမှုတညျဆောကျအသုံးပြုသူတစ်ဦးလျှင်ပျမ်းမျှအဝင်ငွေကြီးထွားနှင့်အသစ်ဖောက်သည်ဆည်းပူးဖို့အော်ပရေတာလက်နက် ပြု. သုံးစွဲကြောင်းအသိအမြင် generate မှ AI အများနှင့်စက်သင်ယူမှု leverages ။
Paywizard သည့်အပေါ် Singula ™သရုပ်ပြပါလိမ့်မည် Microsoft က (မတ်တပ်ရပ်ခန်းမ 1, C27) အမှာ IBC 2019 မှာ RAI အမ်စတာဒမ်, စက်တင်ဘာလ 13-17, Singula ™ပြီးသားကနဦး beta ကိုစမ်းသပ်မှုတွေ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ထိုကဲ့သို့သော eir အားကစားနှင့်ပြိုင်ပွဲတီဗီအဖြစ်ဦးဆောင်ထုတ်လွှင့်များ၏တစ်ဦးအရေအတွက်ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်ဘယ်လောက်ဖေါ်ပြခြင်း။ တဖောက်သည်ဝယ်ယူမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအတွက် ပြိုင်ပွဲတီဗီ, ဗြိတိန်နှင့်အိုင်ယာလန်ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်မြင်းပြိုင်ပွဲရုပ်သံလိုင်း, Singula ™နိုင်ခဲ့သည် နှစ်ဆ ပြောင်းလဲခြင်းမှုနှုန်းကျော်နှင့်အတူကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ဖြစ်ခြင်းစဉ် 94% တိကျမှန်ကန်မှု တစ်ဦးအခမဲ့အစမ်းအစီအစဉ်တွင်မြင့်မားသောအန္တရာယ် churners ။
"Singula ™ OTT အာဏာနှင့်ထိုကဲ့သို့သောပြိုင်ပွဲတီဗီအဖြစ်ပေးဆောင်-TV ကိုပံ့ပိုးပေး၎င်းတို့၏ဖောက်သည်အတွေ့အကြုံကိုအသွင်ပြောင်းခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်စာရင်းပေးသွင်းထားသူခရီးသွားတစ်ဦးချင်းစီနှင့်တိုင်းအဆင့်တွင်စာရင်းပေးသွင်းသူထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့," ကပြောပါတယ် Bhavesh Vaghela, Paywizard ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုတေသနပြပွဲအော်ပရေတာလူကြီးမင်းဖောက်သည် data တွေကိုမူတည်ပြီးမှရုန်းကန်နေကြသည်။ တကယ်တော့ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောအလွန်အမင်းအဖြစ်အပြုအမူကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ကြိုးစားနေအများအပြားအဖွဲ့အစည်းများ, ကြည့်ရှု, ဒါပေမယ့်အများဆုံးအပြုသဘောဖောက်သည်ရဲ့အတွေ့အကြုံကို impact မှ real-time ၌ဤထိုးထွင်းသိမြင်မူတည်ပြီးပျက်ကွက်နေကြပါတယ်။ "
Singula ™အသုံးပြုခြင်း, တီဗီဝန်ဆောင်မှုပေးယခုရရှိနိုင်ဖောက်သည်အချက်အလက်ပေါ်ဆွဲနိုင်ကြသည် - ငွေတောင်းခံ, ကြည့်ရှု, လူဦးရေအချိုးအစားနှင့်အမူအကျင့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုအပါအဝင် - Real-time အတွက်ဖောက်သည်ခရီး၏သော့ချက်အဆင့်မှာတစ်ခုချင်းစီကိုစာရင်းပေးသွင်းထားသူတစ်ဦးအပြည့်အဝမြင်ကွင်းကိုရဖို့ရန်။ "အစဉ်မပြတ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး, ကမ်းလှမ်းမှု, ပရိုမိုးရှင်းများနဲ့ဖောက်သည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကနေလေ့လာသင်ယူအားဖြင့် Singula ™ hone-In ဖို့အထိရောက်ဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်ပေါ်တွင်ဖောက်သည်ဘဝမှတ်တိုင်သံသရာစက်ဝိုင်းတစ်လျှောက်လုံးကိုမှန်ကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရလဒ်များကိုကားမောင်း, ယူနိုင်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်" ဟု Vaghela မှတ်ချက်ပြုထားသည်။
Bob က De Heaven, အထွေထွေမန်နေဂျာ, မိုက်ကရိုဆော့ဖကော်ပိုရေးရှင်းမှာကမ္ဘာတစ်ဝန်းမီဒီယာ & ဆက်သွယ်ရေး, says: "Microsoft မှ Azure စွမ်းအားဖြင့် Paywizard Singula ™မှတဆင့်ဖောက်သည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမောင်းထုတ်ရန် AI အအသုံးပြုခြင်း cloud-based နည်းပညာများ၏အလားအလာသည်ယနေ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအသွင်ပြောင်းဖို့ပြသထားတယ်။ ကျနော်တို့ဆက်ဆံရေးမြှင့်တင်ရန်ကြောင်းဖောက်သည်အတွေ့အကြုံများကယ်နှုတ်တော်မူခြင်းနှင့်ဝင်ငွေကြီးထွားကူညီပေးဖို့ AI အများကဲ့သို့နည်းပညာသစ်များအနေဖြင့်အကျိုးခံစားရဖို့မီဒီယာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို enable Paywizard အတူလုပ်ကိုင်နေကြတယ်။ "
Singula ™ကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်ဆွဲ, လစာ-TV ကိုစာရင်းပေးသွင်းထားသူစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် Paywizard ရဲ့ 20 နှစ်အမွေအနှစ်သို့ပုတ် 100 ကြေးပေးသွင်းထက်ပိုပေးဆောင်-per-အမြင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ supporting ကနေရရှိခဲ့ - subscriber များအားသန်းပေါင်းများစွာအတွက်အရအေတှကျအတူ။ ဖောက်သည်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွေ့အကြုံနှင့်ဆန်းသစ်သောနည်းပညာ၏ Paywizard ရဲ့ပေါင်းစပ်သူတို့ရဲ့ analytics စွမ်းရည်တိုးနှင့်တစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်အားသာချက်ရရှိရန်ဝန်ဆောင်မှုအော်ပရေတာနိုင်ပါတယ်။
ပလက်ဖောင်းတစ်ဦးချင်းစီစာရင်းပေးသွင်းထားသူတစ်ဦးလူပျိုဖောက်သည်ကြည့်ရန်ဖန်တီးခြင်းနှင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်မော်ဒယ်များအသုံးချမှာထူးချွန်၏ဒေတာသိပ္ပံစင်တာနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. created Edinburgh တက္ကသိုလ်, ဖောက်သည်တစ်ဦး, သူတို့ရဲ့ဖွယ်ရှိတုံ့ပြန်မှုများနှင့်အခြားအချက်များအဖြစ်လာမယ့်အကောင်းဆုံးကြောင့်စာရင်းပေးသွင်းထားသူဖောက်သည်ခရီး၌တည်ရှိ၏ဘယ်မှာရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်းလုပ်ရပ်များ, သူတို့ရဲ့တန်ဖိုးကိုဆုံးဖြတ်ရန်။ အဆိုပါအရေးယူဆောင်ရွက်မှုရိုးရှင်းစွာအလျှင်းမပြုကြရန်ပင်အချိန်မီမြှင့်တင်ရေးကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုသိကောင်းစရာများဆက်သွယ်ရေး, ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်နိုင်ပါ။
Singula ™လည်းတစ်ခု In-app ကိုအကြောင်းကြားစာ, လူမှုရေးမီဒီယာကြော်ငြာ, စမတ်ဖုန်းမှစာသားတစ်ခုအီးမေးလ်, အီလက်ထရောနစ်ပရိုဂရမ်လမ်းညွှန်ကနေတဆင့်ဆက်သွယ်ရေး, တစ်စိတ်ကြိုက် user interface ကို, ကို web ချက်တင်ပါဝင်နိုင်ပါသည်သော action ကို execute ရန်အသင့်လျော်ဆုံးရုပ်သံလိုင်းဖော်ထုတ်ရန်ကူညီပေးသည် တစ်ဦးအေးဂျင့်ကနေ, ဒါမှမဟုတ်အဆက်အသွယ်။ တစ်ဦးချင်းစီ subscriber များအားပစ်မှတ်ထားဖို့ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးအပေါ်အနာဂတ်အကြံပြုချက်များသို့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောထိုးထွင်းသိမြင်ထုတ်လုပ် - ဒါဟာထို့နောက်စက်ဟာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမော်ဒယ်များ update လုပ်ဖို့သင်ယူအသုံးချတဲ့အဖိုးတန်တုံ့ပြန်ချက်သည် loop ကနေတဆင့်ရလဒ်ဖမ်းယူ။
Paywizard မိုက်ခရိုဆော့ဖ်မှာ Singula ™ပြပါလိမ့်မည် IBC 2019 တလျှောက်လုံးရပ်တယ်။ တစ်သရုပ်ပြမြင်နေသို့မဟုတ်အစည်းအဝေးတစ်ခု booking စိတ်ဝင်စားကုမ္ပဏီများသွားသဖြင့်ရက်ချိန်းစာအုပ်ဆိုင်နိုင်ပါတယ် www.paywizard.com/ibc/.
ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor OTT SJGolden - စာတန်းထိုး, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana, မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး, IBC TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဖိုရမ် virtual reality 2019-09-10
ယခင်: Bitmovin Microsoft က Azure အပေါ် encoding ကများနှင့်ကစားသမားဖြေရှင်းချက်၏ရရှိမှုကိုကြေညာ
နောက်တစ်ခု: LiveU တိုက်ရိုက်လွှမ်းခြုံများအတွက်ပထမဦးစွာပေါင်းစည်း 5G ဆယ်လူလာ Bond ယူနစ်ကိုထုတ်ဖော်ပြသ